Kooxda Honor Band 5 ayaa la soo bandhigi doonaa dabayaaqada bishan | Androidsis
Sharafta 9X ayaa la soo bandhigi doonaa dhammaadka bishan si rasmi ah, sidaan dhowaan baranay. Waxaa jira warar badan oo xan ah oo ku saabsan furitaanka taleefanka, maxaa yeelay waxaa la isla dhexmarayay inuusan kaligiis imaan doonin, maadaama ay agtiisa jiri karto nooc Pro ah. Laakiin waxay u muuqataa inay jiri doonaan warar intaas ka badan, maaddaama Kooxda Sharafta Shanaad 5 sidoo kale lagu soo bandhigi doono taleefankan.
Jijimooyinka waxqabadka wali waa ikhtiyaar xiiso weyn u leh suuqa. Noocyo badan ayaa naga tagaya moodooyinkooda. Kooxda Sharafta 5 Waxay horey u ahaan laheyd jiilka shanaad ee nooca Shiinaha uu naga tago. Ma ogin haddii ay jiri doonaan isbeddelo badan marka loo eego jiilkeedii hore.
Maamulaha guud ee shirkada ayaa noqday qofkii ugu horeeyey ee hoos u dhiga oo aan ka filan karno jijin cusub. In kasta oo aan la xaqiijin in Maamuuska Sharafta 5 waxaa lagu soo bandhigi doonaa bisha Luulyo 23 iyada oo telefoonka ah. Laakiin ma ahan wax la yaab leh in calaamaddu ay ka faa'iideysato dhacdadan si ay sidoo kale u soo bandhigto jijinteeda cusub. Way ku badan tahay suuqa.
Sidoo kale, sanadkii hore jiilka afraad waxaa la gudoonsiiyay Sharafta 8X. Sidaa darteed, ma ahan wax la yaab leh haddii calaamaddu ay raacdo isla istaraatiijiyaddan kiiskan oo leh jiilkan cusub ee jijintiisa. Jijimooyin ku sii kordhaya joogitaanka suuqa iyo waxa summaddu doonayso inay ka faa'iidaysato.
Waxaan sugi doonaa xoogaa xaqiijin ah imaatinka kooxdan Sharafta leh ee 5. Sidoo kale ma hayno faahfaahin xilligan oo ku saabsan jiilkan cusub ee jijin. Marka waxaan rajeyneynaa inaan si dhaqso leh wax uga ogaanno waxa ay summaddu kula qorsheysay, xagga hagaajinta iyo howlaha cusub.
Hadday run tahay in lagu soo bandhigi doono Sharafta 9X, in ka yar saddex toddobaad waa inaan horey u ogaanno Kooxdaan Sharafta 5. Marka sugitaanka arrintani runtii way gaaban tahay. Laakiin waxaan rajeyneynaa inay jiri doonto xaqiijin ka timid soo saaraha Shiinaha laftiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Kooxda Honor Band 5 waxay la imaaneysaa Honor 9X